पिंकी गुरुङ - अन्य - नारी
चैत्र १३, २०७७ नेपालमा हालको अवस्थामा तेस्रोलिङ्गी समुदायलाई कुन स्थानमा पाउनुभएको छ ?
नेपालमा तेस्रो लिङ्गी समुदायको अवस्था प्रगतिशीलतातर्फ उन्मुख छ । हिजो लुकेर बसेको यो समुदाय आज खुलेर आवाज मुखरित गर्न अभिप्रेरित छ । समाजमा स्वीकार्यता र संवेदनशीलता बढ्दै छ भने समुदाय आफै पनि सतर्क हुँदै आएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा तेस्रो लिङ्गीहरू अग्रपंक्तिमा आएको पाइएको छ । मोडलिङ क्षेत्रमा अञ्जली लामा, मेकअप आर्टिस्टमा सोफी सुनुवार र व्यवसायीमा मेघना लामा । राज्यले तेस्रालिङ्गीका लागि नागरिकताको हकमा लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ भनेर पहिचान दिन सुरु गरिसकेको छ । नागरिकता र पासपोर्ट ‘अन्य’ बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । राज्यले पहिचानको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । पहिचानसँग जोडिएका अन्य अधिकारहरू अझै राज्यबाट प्राप्त हुन सकेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा पहुँच बढ्न सकेको छैन । पारिवारिक र समाजिक बहिष्करणका कारण धेरै तेस्रो लिङ्गी जोखिमपूर्ण व्यवहार सहन बाध्य छ । त्यसैले धेरै साथीहरू एचआइभी/एड्सजस्ता रोगको संक्रमणमा छन् । धेरै साथी मानसिक समस्यामा पनि छन् । यो लकडाउनमा १९ जनाले आत्महत्या गरे भने १० जनाले आत्महत्याको प्रयास गरेका छन् ।
यो समुदाय के चाहन्छ ?
माया, सद्भाव, सम्मान, समावेशी, प्रतिनिधि अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र अवसर चाहन्छ । यो आजको समय र समुदायको आवश्यकता हो ।
तेस्रो लि·ीको राज्यसँगको अपेक्षा के हो ?
हामीले अरुलाई भन्दा बढी अधिकार देऊ भनेको होइन । अरुले जस्तै सहज र सरल तरिकाले बाँच्न देऊ मात्र भनेका हौं । जसरी महिला र पुरुषले नागरिकता प्राप्त गर्न मेडिकल प्रमाण र सिफारिसको आवश्यकता पर्दैन त्यसरी नै सर्वघोषणा र आत्मनिर्णयकै आधारमा नागरिकता प्रदान गरिदिए हुन्थ्यो । राज्यको कानुन र समाजमा जसरी अन्य वर्ग, धर्म, जाति र लिङ्गहरूले मान्यता पाएका छन् त्यसरी नै हाम्रो समुदायले पनि पाउनुपर्छ । अहिलेसम्म जनगणनाले तेस्रो लिङ्गीलाई समेट्न नसक्दा हाम्रो समुदाय तथ्यांकविहीन बनेको छ । जनगणनामा समावेश गराई राष्ट्रिय तथ्यांकका आधारमा अन्य समुदायसरह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र आरक्षणको अधिकार दिनुपर्छ ।
विगतका दिनमा कत्तिको चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो ?
आफ्नै लैङ्गिक पहिचान दुनियाँका लागि उपहासको पात्र बन्ने गर्थ्यो । बिहान घरबाट निस्किएपछि राति घर नफर्केसम्म समाजका तिखा नजर, तुच्छ बोली, हेला र तिरष्कार अनि अपमान, हिंसा र कुटपिट हाम्रो नियति नै बनेको थियो । मनका वेदना पोख्ने ठाउँ थिएन । परिवार र समाजको डरले लुकेर बस्नुपर्थ्यो । रत्नपार्कमा प्रहरीले कुटेको, केटाहरूले ब्ल्याकमेल गरेको, सभ्य र नैतिकवान् राजनीतिकर्मीहरूले छम्का र हिजडा आउन बन्द गरौं भन्दै भीडमा अभिव्यक्ति दिएको अझै सम्झन्छु । संकटकालमा माओवादीले आर्मीको मारुनी र आर्मीले माओवादीको सुराकीको शंका गरी पेस्तोल तेर्स्याएका थिए । धेरै साथीहरू सडकमै थिए, त्यहीँ सुत्थे । यौन कर्मबाट कमाइ पनि थोरै थियो ।
तपाईं आफूलाई एकै वाक्यमा व्याख्या गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?
आफ्नो र समुदायको अधिकारका लागि लड्ने एउटा जिउँदो र तातो रगत भएको मान्छे ।
तपाईंलाई आत्मादेखि गर्न मन लागेको कुनै काम ?
एक्लै जीवन बिताउन बाध्य वृद्ध समलिङ्गी र तेस्रो लिङ्गी समुदायका लागि आश्रयस्थल बनाउने मन छ ।
तपाईं केका लागि लडिरहनुभएको छ र यसको गन्तव्य के हो ?
म पारिवारिक विभेद, सामाजिक बहिष्करणको अन्त्य, आवाजविहीनहरूको आवाज बुलन्द, समुदायको नेतृत्व र क्षमता विकास गरी आवश्यक नीति, विधि र कानुन परिवर्तन गर्दै भेदभावरहित समाजको निर्माण र तेस्रो लिङ्गीको जीवन स्थापित गराउन लड्दै आएकी छु । समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमा कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन । त्यसैले मैले मेरो अन्तिम गन्तव्य अहिले नै निधो गर्न सक्दिन ।
जीवनभरका लागि कुनै एउटा वस्तु छोड्नुपर्‍यो भने के छोड्नुहुन्छ ?
लोभ, मोह र भोक त्याग्न सके मनलाई सुख र शान्ति प्राप्त हुनेछ ।
एकदिनका लागि कुनै चमत्कार गर्न सक्ने शक्ति प्राप्त भए के गर्नुहुन्थ्यो ?
त्यस्तो चमत्कार गर्ने शक्ति प्राप्त भए सबैले सबैलाई माया गर्ने मन र समान देख्ने नजर बनाइदिन्थें ।
वैशाख ७, २०७७ - महिला जनप्रतिनिधि अब्बल
चैत्र ४, २०७६ - गायनमा सराना
फाल्गुन ८, २०७६ - कोटको फेसन
माघ २३, २०७६ - मिसेस एण्ड मिस गुरुङको ट्यालेन्ट राउण्ड सकियो
मंसिर २७, २०७६ - सागमा नेपाली महिला : स्वर्णिम खुसी
मंसिर १०, २०७६ - हङकङ स्नुकर च्याम्पियन कुमार
किशोरीलाई गीत गाउन प्रतिबन्ध वैशाख ७, २०७८
नेपालमा यसरी मनाइन्छ वैशाख ३, २०७८
नयाँ वर्ष मनाउने मौलिक शैली वैशाख ४, २०७८
नव वर्षका पाँच संकल्प वैशाख ३, २०७८
हस्तकला मेला २०७७ चैत्र १७, २०७७
कहाँ छ महिला अधिकार ? चैत्र १०, २०७७